खगेन्द्रकाे ‘धनपति’ काे प्रदर्शन मिति तय | Suvadin !
अागामी वर्षकाे असार २३ गतेलार्इ प्रदर्शन मिति तय गर्दै फिल्म ‘धनपति' काे छायांकन सकिएकाे निर्माण पक्षले जनाएकाे छ। लेखक तथा कलाकार खगेन्द्र लामिछानेकाे अाफ्नै लेखनमा रेहेकाे फिल्म 'धनपति' काे छायांकन सकिएकाे हाे।
Mar 05, 2017 17:36
काठमाडाैं, फागुन २२ - अागामी वर्षकाे असार २३ गतेलार्इ प्रदर्शन मिति तय गर्दै फिल्म ‘धनपति' काे छायांकन सकिएकाे निर्माण पक्षले जनाएकाे छ। लेखक तथा कलाकार खगेन्द्र लामिछानेकाे अाफ्नै लेखनमा रेहेकाे फिल्म 'धनपति' काे छायांकन सकिएकाे हाे।
उक्त फिल्ममा कलाकार खगेन्द्र मुख्य भूमिकामा छन्। दिपेन्द्र के खनालकाे निर्देशनमा बनेकाे याे फिल्म सपना र अहंकारले मान्छेलार्इ कता कता ठाेक्याउछ? भन्ने विषयमा बनिएकाे निर्माणपक्षले जनाएकाे छ। फिल्ममा खगेन्द्रकाे अपाेजिटमा नायिका सुरक्षा पन्त छिन्। फिल्ममा सुरक्षा खगेन्द्रकाे श्रीमतीकाे भुमिकामा छिन्।
टुकि अार्टस् र दिपेन्द्र खनालकाे प्राेडक्शनमा बनेकाे याे फिल्मकाे सम्पुर्ण छायांकन शनिबार सकिएकाे निर्माणपक्षले जानकारी दिएकाे छ। गत वर्ष प्रदर्शनमा अाएकाे हिट फिल्म पशुपतीप्रसादका लेखक र निर्देशक हुन् खगेन्द्र।